Bixi Biilashaada - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xubin Is-Adeeg > Bixi Biilashaada
Ku bixi biilkaaga billaha ah ama biilka daryeelka caafimaadka khadka tooska ah adoo adeegsanaya boggayaga ammaan.
Hadda waxaad ku bixin kartaa biilashaada Medicare khadka tooska ah. E-Bill Express waa boggayaga lacag bixinta oo sugan oo kuu oggolaanaya inaad ku bixiso khidmaddaada bilaha ah ee Medicare iyo biilasha caafimaadka ee khadka tooska ah. Biilasha ayaa laga heli karaa E-Bill Express bil kasta. Waxaad sameyn kartaa hal lacag bixin ama waxaad sameyn kartaa lacag bixin toos ah oo soo noqnoqota.
BIILKAAGA KU BIIR INTAR
Waxaad sidoo kale awood u leedahay inaad bedesho ikhtiyaariyada lacag bixinta ee caadiga ah. Haddii aad doorbideysid inaadan isticmaalin nidaamka lacag bixinta ee khadka tooska ah, wali waad ku soo gudbin kartaa lacag bixinta boostada. Adeegso Foomka Xulashada Lacag Bixinta si aad noogu soo wargeliso dookhaaga.
Adeegsiga E-Bill Express
Waxaan u abuurnay casharradan soo socda si aan kuu tusno sida loo qoro E-Bill express, loo sameeyo hal lacag bixin, ama laga sameeyo koontadaada lacag-bixin soo noqnoqota. Waxaan sidoo kale diyaarinay liis ah Su'aalaha
Casharrada: Ku bilaabashada E-Bill Express
Sida Loo Diiwaangaliyo E-Bill Express
Casharbarka: Sida Loo Diiwaangaliyo E-Bill Express
Sida Loo Sameeyo Lacag Halmar Ah Markii Aad Isqorto
Sida Loo Dejiyo Lacag Soo Noqnoqota
Cashar Cashar: Sida Loo Dejiyo Lacag Soo Noqnoqota
Sida loo Isticmaalo Bixinta Hada Lacag Bixinta
Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo Ee Ku Saabsan Biilasha
Kadib markaan iska diiwaangaliyo adeegan lacag bixinta, goorma ayaan bilaabi karaa bixinta biilasha?
Ka dib markaad dhammaystirto oo aad soo gudbiso foomka diiwaangelinta oo aad ka jawaabto emaylka hawlgelinta, waxaan bilaabi doonnaa adeeggaaga isla markiiba. Waxaad markaa uheli kartaa adeegga si aad ubixiso biil hadda jira ama aad u aragto biilalkii hore. Waa inaad bilowdaa helitaanka ogeysiiska E-Bill bil gudaheed ama wax la mid ah, iyadoo kuxiran wareegga biilka.
Ma ku bixin karaa qayb ahaan qayb ka mid ah ama bixin karaa lacag dheeraad ah koontadayda?
Haa. Bogga "Bixi Biilalkayga", waxaad ku tilmaami kartaa haddii lacagta aad bixinaysaa ay tahay qayb ama "mushahar gaaban" ama lacag ka badan. Haddii qaddarka lacag-bixinta ay u dhigmayaan lacagta lagaa doonayo, markaa uma baahnid inaad calaamadeyso sanduuqa midkood. Haddii aad bixiso qayb ahaan qayb ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad sii waddo bixinta illaa inta lacagta la bixinayo oo dhammaystiran. Haddii aad lacag badan bixiso, deyn togan ayaa ka soo muuqan doonta koontadaada oo aad u isticmaali karto inaad ku bixiso biilasha hadhow.
Miyaan ubaahanahay qalab ama softiweer khaas ah si aan ugu qoro adeegyadan lacag bixinta ee E-Bill Express?
E-Bill Express waxay taageertaa nidaamyada soo socda:
Nidaamka isticmaalaha ayaa yeelan doona OS iyo biraawsar qaab caadi ah loogu talagalay dadka isticmaala dhamaadka
E ‐ Bill Express waxay taageertaa: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 kombuyuutarka
Barnaamijka Windows OS ee kombiyuutarada, E ‐ Bill Express wuxuu taageeraa:
Nooca hadda jira ee Microsoft Internet Explorer® - IE11 - noocyadii hore waxay lumiyeen taageerada Microsoft o Nooca hadda ee Firefox® (FF) oo lagu daray kii hore 1 o Nooca hadda ee Chrome® oo lagu daray 1 kii hore
E ‐ Bill Express wuxuu ku taageeraa OS X® 10.9+ Mac
Barnaamijyada OS ee ku jira Mac: o E ‐ Bill Express waxay taageertaa nooca hadda ee Safari Current
E ‐ Bill Express ma taageerto Safari kombuyutarka, ama biraawsarro kale ama OS kumbuyuutarka ah
Lagu daray EBE v6.0: o IOS 8 iyo 9 taageerada iPad v2 + iyo iPhone v4 + iyo keydka Safari ee qalabkaas iyo OS o Android v4.4 + iyo keydka keydka ee OS iyo aaladda
Intii lagu gudajiray hawsha diiwaangelinta E-Bill Express, waxaan garaacay badhanka "Back" si aan u arko shaashad hore. Hadda ma gali karo dib-u-noqoshada maxaa yeelay lambarkeyga sirta ah lama aqbalo. Maxaan sameeyaa marka xiga?
Waa macquul in cinwaanka cinwaanka la beddelay markii aad garaacdo “Back”. Si loo xaliyo dhibaatadan, si fudud dib uga bilow shaashadda gelitaanka-E-Bill Express. Waxaad ka heli kartaa adiga oo gujinaya xiriiriyeha kore ee boggan, ama gujinaya badhanka hoose:
Soo gal si aad Biilkaaga u Bixiso
Sideen ku xaqiijin karaa in lacag la bixiyay?
Mar alla markii aad soo gudbiso lacag bixinta, daaqad xaqiijin ah ayaa soo baxaysa si loo xaqiijiyo macaamilka oo lagu siiyo lambarka xaqiijinta. Waxaan kugula talineynaa inaad keydiso ama daabacato bogga diiwaanadaada.
Sideen u dajin karaa lacagaha tooska ah ee soo noqnoqda?
Si looga caawiyo xubnuhu dejinta xisaabaadkooda E-Bill Express, waxaan abuurnay cashar fiidiyow oo gaar ah oo fudud oo la raaci karo tilmaamaha. Fadlan eeg qaybta "Casharrada" si aad u bilowdo.
Intee in le'eg ka hor taariikhda kama-dambaysta ah ayaan jadwal u bixinayaa lacag-bixinta?
Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad jadwal u sameyso lacag bixintaada ugu yaraan 3 maalmood oo shaqo kahor taariikhda saxda ah ee bixinta.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa lacag bixinta si loogu diro koontada qorshaha caafimaadkayga?
Fadlan u oggolow ugu yaraan 3 maalmood oo shaqo in lacagaha lagu dabaqo koontadaada, markaa fadlan u qorshee lacag-bixintaada si waafaqsan.
Fiidiyowyada casharradu lama helayo mana jiro farriin sababta aysan u ciyaari doonin. Sidee arintan wax looga qaban karaa?
Tani way dhici kartaa haddii aad isticmaaleyso barnaamij soo-fidiyo ama xanibaado xayeysiis ah. Haddii aad haysato barnaamij xayeysiis xayeysiis ah meesha, waxaad caadi ahaan haysataa ikhtiyaar aad ku oggolaan karto ka-reebis deg-deg ah oo loogu talagalay soo-baxa sida fiidiyowyadayada casharka ah Isku day inaad hoos u dhigto badhanka CTRL markaad gujiso xiriirka. Haddii fariin lagu soo bandhigo biraawsarkaaga in "pop-up la xayiray," dhagsii farriinta oo u oggolow pop-up ka socda boggeena.
Maxaa dhacaya haddii aanan bixin biilka lacagta caymiska ee qorshahayga caafimaad?
Waa inaad iska bixisaa wixii biilal caafimaad ah ee aad hayso. Haddii aadan wada bixin karin lacagta oo dhan hal mar, waad soo gudbin kartaa qayb ahaan lacag bixinta. Haddii aanan helin lacag bixinta adeegyada la bixiyo, tani waxay saameyn ku yeelan doontaa caymiskaaga. Waxaan xaq u leenahay inaan joojino adeegga.
Kawaran hadaan ilaaway lambarkayga sirta ah?
Adeegso shaashadda hore si eraygaaga e-maylka loogu soo diro cinwaanka emaylka aad isticmaashay markii ugu horreysay ee aad is qorto.
Goorma ayaa lacagta laga soo saaraa koontadayda bangiga ama kaarka deynta?
Lacagta waxaa laga soo qaadaa xisaabtaada isla maalinta ganacsiga ama maalinta shaqada ee xigta, haddii lacag la soo gudbiyo.
Goorma ayaa lacagta bixinta laga soo qaadayaa koontadayda bangiga?
Lacagta lacag-bixinta waxaa laga soo saarayaa koontadaada taariikhda lacag-bixinta jadwalka. Maskaxda ku hay inaad marwalba haysato lacag aad ku daboosho lacag bixinta taariikhdaas.
Ayaa bixin kara kharashka qorshahayga caafimaad?
Qof kasta oo marin u heli kara koontadaada 'myCHPW' wuu bixin karaa.
Ma heli doonaa xusuusin ah inaan haysto E-Bill diyaar u ah daawashada iyo bixinta?
Waxaad heli doontaa ogeysiis e-mayl ah oo ku xusuusinaya adiga in E-Bill lagu daray akoonkaaga oo uu diyaar u yahay lacag bixin.